आखिर किन एक साथ आफ्नो श्रीमानसंग पर्दामा देखिन चाहनन् दीपिका?? - Experience Best News from Nepal
आखिर किन एक साथ आफ्नो श्रीमानसंग पर्दामा देखिन चाहनन् दीपिका??
प्रकाशित मिति : सोमवार, पुस ३०, २०७५
हालै विवाहबन्धनमा बाधिएकी बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफना श्रीमान रणवीर सिंहसँग फिल्म खेल्न इन्कार गरेकी छिन् । दीपिकाले फिल्म ‘८३’ मा रणवीरसँग काम गर्न इन्कार गरेकी हुन् । कविर खानद्वारा निर्देशित फिल्म ‘८३’मा दीपिका र रणवीरले सँगै अभिनय गर्ने लगभग पक्का भएको थियो । उक्त फिल्ममा क्रिकेटर कपिलदेवको भूमिकामा रणवीर र दीपिकालाई कपिलदेवकी श्रीमतीको भूमिकामा अफर गरिएको थियो ।
समाचार अनुसार दीपिकाले फिल्ममा आफ्नो भूमिका सशक्त नभएका कारण फिल्म खेल्न नमानेकी हुन् । फिल्मको कथा कपिलदेव र क्रिकेट विश्वकपको वरिपरि घुम्ने र आफ्नो भूमिकाले खासै छाप छोड्न नसक्ने भएकाले दीपिकाले अभिनय गर्न नमानेको बताइएको छ ।
दीपिकाले रणवीर सिंहलाई भन्दा पनि भूमिकालाई हेरेर फिल्म खेल्ने भएकाले दीपिकाले उक्त फिल्म छोडेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । भारतीय क्रिकेट टिमद्धारा सन् १९८३ मा जितेको विश्वकपमा आधारित फिल्म ‘८३’ निर्माण हुने भएको हो ।
तस्बिरमा हेर्नुहोस, उस्तै अनुहार भएका ९ बलिउड र हलिउड कलाकारहरु !
अनि बिहे पश्चात दीपिका रणवीरलाई बधाई दिनेको लर्को
वक्सअफिसमा ‘सिम्बा’को गतिलो सुरूवात, पहिलो दिन कमायो यति करोड !
२०१८ का ५ चर्चित विवाह (हर्नुहोस फोटोफिचर)
सानै उमेरमा नै शारिरिक सम्बन्ध राखेका यी ५ चर्चित बलिउड कलाकारहरु
दिपिका: रनवीरलाई कण्डमको प्याकेटहरु उपहार दिन चाहान्छु !!
‘किक २’ मा दिशा पटानी र सलमान खानको जोडी !
कस्तो छ साउथ स्टार ब्रह्मानन्दमको अवस्था
के सुनिल ग्रोबर ‘दि कपिलशर्मा शो’ मा फर्किदै छन् ? जान्नुहोस भित्री कुरो के छ ?
फेरी कसले गर्यो कट्रिनालाइ विहे गर्ने प्रस्ताव !!
प्रिया प्रकाश : डेब्यू चलचित्र मै लफडा र विवाद !! कारवाहीको माग गर्दै बोनी कपुर